Taa na ngwa dị ịtụnanya maka gam akporo, ebe a na -adọba ụgbọalaRadar | Androidsis
Anyị na -alaghachi nke ọma na ngalaba a Gam akporosis ebe ị nwere ike ịhụ nke kacha mma na nke kachasị ngwa dị ịtụnanya maka sistemụ arụmọrụ gam akporo. N'oge emume a, achọrọ m igosipụta ihe karịrị ngwa na -akpali akpali, ngwa ọrụ dị mkpa maka ndị ọkwọ ụgbọ ala niile n'obodo ndị ahụ enweghị ike ịchọta oghere na -adọba ụgbọala n'efu na -eme ka anyị nwee obi nkoropụ.
Enwere ike ịchọta ngwa a na -ekwu n'efu na Google Play Store, ụlọ ahịa ngwa maka gam akporo, n'okpuru aha na -adọba ụgbọala.
Kedu ihe aparcaRadar na -enye anyị?
Ogige Rada, ọ bụ, dịka m kwuru obere oge gara aga, ọ bụ otu ngwa ma ọ bụ ngwaọrụ maka gam akporo, nke ezubere maka ndị ọkwọ ụgbọala n'obodo ukwu, nke ga -eme nyere aka chọta ebe a na -adọba ụgbọala n'efu ọ bụ ihe siri ike ịchọta n'obodo ukwu ndị Spain.
Ngwa a na -arụ ọrụ n'ụdị na mgbe onye ọrụ na -adọba ụgbọala na -ahapụ oghere ebe a na -adọba ụgbọala nke na -enweghị n'efu, ngwa n'onwe ya na -enweghị mkpa ntinye aka, zigara ndị ọrụ niile nke ngwa nọ na mpaghara ahụ ọkwa, Luna rịba ama site na ọkwa na -adọ anyị aka na ntị maka ịdị adị nke ebe a na -adọba ụgbọala nke a gbahapụrụ agbahapụ, yabụ na -enwere onwe ya maka iji ọkwọ ụgbọ ala ọzọ nwere ọgụgụ isi ma ọ bụ nwee ihu ọma.
Amụma a nọ n'ọrụ, mgbe ịpị ya ga -egosi anyị akara akara na maapụ, saịtị na kpọmkwem ebe ohere efu na -adọba ụgbọala na onye ọrụ ngwa ọzọ hapụrụ.
N’ụzọ ezi uche dị na ya, ọkwa ndị a ga -egosi anyị na maapụ ga -adaba na oghere na -adọba ụgbọala efu nke ndị ọrụ aparcaRadar ndị ọzọ na -arụ ọrụ hapụrụ. Ụfọdụ ebe efu nke a ga -egosi anyị naanị n'ime a radius nke ihe dị ka mita 1000 gburugburu ebe anyị nọ ugbu a ma ọ bụrụ na ahapụla ha n'ime nkeji iri abụọ gara aga.
N’enweghị mgbagha na -adọba ụgbọala Ọ bụ ezigbo echiche na echiche ngwa maka ndị ọkwọ ụgbọ ala ahụ na -enweghị nkụda mmụọ na -ejedebe oge na awa n'ịchọ ebe a na -adọba ụgbọala n'efu. Ngwa nke na -eji ntakịrị nke nta na -eto na nbudata, ugbua gburugburu Nbudata 5000 na -arụ ọrụ na Storelọ Ahịa Google Play.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Ngwa ngwa Android dị egwu: ParkRadar Taa
Wezugara nkọwa nke Honor 7 Plus
Etu esi eji ụlọ nyocha, ihe ọmụmụ nke isii: Creatmepụta ngwaọrụ egwu anyị